Sida loo isticmaalo taariikhqorihii maqal ah in ay qabsadaan audio geeyo
> Resource > Video > Sida loo Download Streaming Audio la taariikhqorihii Audio ah
Dhageysiga cod si online ah ama badbaadiyo in computer u offline loo maqli karo, oo waxa aad jeceshahay? Qaar badan oo idinka mid ah dooran kartaa mid ka mid dambe. Laakiin waa aan macquul ahayn, waayo, waxaad si aad u hesho qalab Ilaaha Qaadirka ah oo u suurta galinaya in aad kala soo bixi music ka dhan websites audio, kuwaas oo wax badan. Nasiib wanaag, taariikhqorihii maqal ah ayaa kaa caawin kara. Wondershare Streaming taariikhqorihii Audio ka mid yahay kuwa ugu fiican. Waxaa u qoraan audio ka website kasta oo karo ilaa iyo inta ay jirto codka ka imanaya your computer. Waa maxay ka badan, wax soo saarka qaab default of audio duubay waa MP3, si aadan u baahan tahay in aad si loogu badalo files ka dibna wareejiyo qalabka la qaadi karo aad. Bal aan hubiyo tallaabooyinka fudud oo ku saabsan sida loo isticmaalo hoos ku qoran.
1 Download oo taariikhqorihii ahaa audio
Download software ah duubista si aad u computer oo ku xidh. Waxaa jira laba nooc, taas oo la mid ah u shaqeeyaan. Sidaas awgeed, waxaan inta badan ka hadli doonaa version daaqadaha.
2 Bilow si ay u qoraan audio ka websites
Orod barnaamijka dib markii rakibidda. Marka hore, ka heli button Record ah ee bidixda xagga kore oo guji. Markaasuu u tag goobta audio jecel inuu ciyaaro audio geeyo. Waa in aad ka ciyaaro mid ka mid song waqti iyo joogtaynta xiriir ah oo deggan internet ku dadaal si aad u hesho dhamaystiran files audio. Dabcan, haddii aad leedahay playlist ah songs, waxaad iyaga joogto ah ka ciyaari kara halka taariikhqorihii ahaa audio garan karaan song kasta oo ay waqti aamusnaan dhexeeya.
Iyada oo lagu qoro, barnaamijka aqoonsan kartaa macluumaadka ku saabsan heesaha. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel macluumaadka naftaada, waxaad tagi kartaa si aad u hesho song ee tab Maktabadda ka dib. Waxaa markaas xaq-riix iyo dooran View Detail. Ku qor macluumaadka aad kartoo in column pop-up xaq.
3 Transfer in Lugood (optional)
The songs diiwaan yihiin oo dhan MP3 files, si aad u bedeli karaa Lugood si toos ah. Halkan waa jidka. Dooro heeso iyo guji Add ka Lugood button ama si xaq-riix in ay doortaan dar File in Lugood.
Notes: a) Si aad u ogaato halka ay ku files audio ku kaydsan yihiin, waxaad xaq u-riixi kartaa file u dooro Open ee Folder.
b) version Mac uusan laheyn dar button Lugood in. Waxaad u baahan tahay si aad u ogaato meesha file waxaa loo kaydiyaa markaas wareejiyo Lugood gacanta.
Waxaad sidoo kale abuuri kartaa playlist ah si ay u maareeyaan files barnaamijka oo ay ka dhigi ringtones oo ka mid ah files audio. Iyadoo qaababka aad u badan fanaaniinta cusub, ha sugin inaad kala soo baxdo oo taariikhqorihii ahaa audio in ay isku day ah. Waxaa laga yaabaa inaad ka hesho wax kadis ah oo dheeraad ah.